Lix sano jir Aabaheed oo Cuuryaan ah daryeesha! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Lix sano jir Aabaheed oo Cuuryaan ah daryeesha!
Lix sano jir Aabaheed oo Cuuryaan ah daryeesha!
Muqdisho – Gabar 6 sano jir ah oo ku nool gobalka Ningxia ayaa taniyo markii ay hooyadeed isaga fogaatay nolosha – iyada iyo aabaheed oo cuuryaan ah – waxay daryeelkii ugu wacnaa u fidisaa aabaheed oo cuuryaan ah.
Tian Haicheng, oo ah 38 jir ah kuna nool Haiyuan County, Ningxia waxaa ku cadaatay talada afar sano kahor markii uu shil gaari galay. Wuxuuna waayay addimada inuu ku socdo, waxaana u haray gacmahiisa inuu ku adeegto. Afadiisa waxay isaga tagtay noloshiisa adag iyada oo sidata wiilkeeda – waxaana isku haray isaga iyo gabadhiisa 6 jirka ah.
Balse halkii Tian looga fadhiyay inuu daryeelo inantiisa, iyada ayaa noqotay qofka kaliya ee noloshiisa degta saartay daryeelkiisa sida inay cunnada u kariso; u qubeyso; una dhaqdo maryihiisa.
Waa wax adag in la rumeysto sida 6 jirad ay nafteeda u daryeeli karto – iskaba daa inay aabaheed xanaaneyso, hayeeshe gabadhani waxay tusaale nool u tahay arrintaas. Muuqaal fiidiyow ah oo ku baahay baraha bulshada Shiinaha ayaa la arkayay gabadhan oo aabaheed ku riixaysa gaariga cuuryaamada, siinaysa cuntada – iskuna dayaysa inay u qabanqaabiso jiifka sariirta.
Waxay taasi aheyd mas’uuliyad aabe inay noqoto. Hayeeshe waqtiga ayaa geesta kale u rogay xaaladaha. Noloshu marwalba ma ahan mid la suuraysan karo.
Taageerada inantiisa awgeed, hadda Tian wuxuu awoodaa inuu kasoo kabsado xanuunka kasoo gaaray shilka iyo dhaawaca maskaxeed oo uu ka qaaday tegista afadiisa. Rajadiisuna waa mid iftiimaysa. In kasta oo shilka gaariga uu ka naafeeyey lugaha, haddana wuxuu naawilayaa inuu bogsado maalin maalmaha kamid ah – isaga oo kaashanaya garbaha inantiisa.
Isaga oo ku faraxsan xaaladda uu hadda ku sugan yahay, aabahani wuxuu sawiradda xaaladiisa kusoo baahiyay baraha bulshada halkaas oo malaayiin jeer la daawaday.
Halka dad badan ay aad ugu riyaaqeen tallaabada quruxda badan ee inantani ku daryeesho aabaheed, qaar kale ayaa nasiib xumo ka muujiyay in – halkii ay la ciyaari laheyd asaageed – ay waqtigeeda ku bixinayso shaqo aysan xilligeeda la gaarin.
Previous: John Terry Oo Aqbalay in uu Ku Soo Laabto Chelsea
Next: Liverpool oo hogaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Aaron Ramsey